Samsung ရဲ့ ISOCELL ကို Kill မဲ့ Sony ရဲ့ 38MP Sensor အသစ် - PX
Sony IMX 607: A New Step of Smartphone Cameras
ဒီ Page ကို စတင်ခဲ့တုန်းက Megapixel တွေများခြင်းဟာ Smartphone Photography ကို တကယ်ရော Effective ဖြစ်စေရဲ့လားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရပ်တံ့မနေတဲ့ နည်းပညာရေစီးကြောင်းက Smartphone တွေမှာ Megapixel များများကို Effective ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့စေခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ Quad Bayer Arrangement လို့ခေါ်တဲ့ Pixel အသေး (၄) ခုကို Pixel အကြီး တစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းပြီး ဖန်တီးတဲ့ Pixel Binning ဆိုတဲ့ နည်းပညာပါ။ (Pixel Binning အကြောင်းကိုတော့ အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပြီးထားပြီမို့ ထပ်မရှင်းတော့ပါ)
သို့ပေမယ့် Pixel Binning ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုက လိုချင်တဲ့ Megapixel ပမာဏကိုရဖို့ Megapixel ကို (၄) ဆတိတိ သုံးပေးရတာပါ။ (ဆိုလိုတာက Pixel Binning မှာ 10MP Photo အတွက် 40MP Camera ကို သုံးရတာမျိုးပါ) အဲဒီအတွက် ပိုကြီးတဲ့ Sensor Size ကိုသုံးရတယ်။ ဒီတော့ 12MP Photo အတွက်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ MP က 48MP ထိ ရှိလာပါပြီ။ (2019 မှာထွက်ရှိမယ့် ဖုန်းတွေမှာ အသုံးများလာမယ့် Camera ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။) အဲဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် Sony ကနေ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်မယ့် Solution တစ်ခုကို ချပြနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ Sony ရဲ့ IMX 607 Sensor ပါ။
Sony ဟာ လက်ရှိ Smartphone Camera ဈေးကွက်ရဲ့ Camera Sensor Main Supplier အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ IMX 363 ဟာ 2018 ရဲ့ Flagship အတော်များများမှာပါဝင်တဲ့ 12MP Camera တွေအတွက် “စံ”တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် Samsung ကနေ Megapixel များများနဲ့ Pixel Binning ကို သုံးနိုင်မယ့် ISOCELL Sensor တွေကို ချပြလာတဲ့အခါမှာ Sony အတွက် ပိုကောင်းမယ့် နည်းပညာတစ်ခုကို ဖန်တီးပြဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ယူဆပုံရတယ်။ ဒီတော့ Sony အတွက်ရော Smartphone Camera နယ်ပယ်အတွက်ပါ Game Changer ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ IMX 607 Sensor မှာ ဘာတွေများ ထူးခြားနေလို့လဲ?
အရင်ဆုံး သူ့မှာပါမယ့် Megapixel နဲ့ စ ရအောင်။ IMX 607 မှာ 38MP ကို အထောက်အပံ့ပြုနိုင်မယ်။ Pixel Binning (4 in 1) အရဆိုရင် သူ့ရဲ့ Effective MP က 9MP ပဲရှိနေမှာပါ။ ဒါဆိုရင် သူ့ Sensor က 48MP Camera သုံးနိုင်မယ့် Sensor တွေထက် ပိုမနိမ့်နေဘူးလားလို့ တွေးစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ 38MP Sensor ကို ပိုကောင်းတဲ့ Sensor အဖြစ် သတ်မှတ်ရခြင်းက သူ့မှာသုံးထားတဲ့ နည်းပညာကြောင့်ပါ။
သူ့ရဲ့ Pixel Arrangement (အောက်ကပုံ) ကိုကြည့်ရင် Red, Green, Blue အပြင် White Pixel တွေကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီတော့ အရင် Quad Bayer Filter တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နဂို Pixel (၄) ခုနေရာမှာ (၂) ခုက White Pixel တွေ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီတော့ White Pixel တွေပါလာလို့ ဘာအကျိုးထူးမလဲ? အလွယ်ပြောရရင် အဖြေက ပိုကောင်းတဲ့ HDR Photo တွေကို ပိုမြန်တဲ့အချိန်အတွင်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ အဲဒီ White Pixel တွေအလုပ်လုပ်ပုံကို နဲနဲရှင်းပါ့မယ်။
Huawei Flagship ဖုန်း အများစု (Mate 20 မပါ) မှာ Monochrome Sensor တွေပါဝင်ခဲ့တာကို မှတ်မိကြမှာပါ။ Monochrome Sensor တွေရဲ့အားသာချက်က Color Filter မပါလို့ သူ့ရဲ့ Pixel တွေဟာ အဖြူ တွေချည်းဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီအကျိုးဆက်ကတော့ အလင်းရောင်ကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး ပိုတိကျပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူနိုင်တာပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း Huawei က Main Camera နဲ့ရိုက်ကူးချိန်မှာ Monochrome Camera ကိုပါ အကူအဖြစ်သုံးခဲ့တာပါ။ အခု IMX 607 မှာတော့ ပိုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံရဖို့ Monochrome Sensor သပ်သပ်မလိုတော့ပါဘူး။
သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက Quad Bayer နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ကန့်လန့်ဖြတ် Pixel (၂) ခုက Short Exposure အတွက် အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ ကျန်တဲ့ Pixel (၂) ခုက Long Exposure အတွက် အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် IMX 607 မှာပါတဲ့ White Pixel တွေကြောင့် အရင် Color တွေထက် အလင်းပိုစုပ်နိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ HDR photo တွေအပြင် Low Light Photography မှာပါ အရင်ထက်ပိုအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အရင် Pixel တစ်ဝက်စီအလုပ်လုပ်တဲ့ Dual PDAF နေရာမှာ Pixel (၂)ခုစီ ခွဲအလုပ်လုပ်မယ့် Quad PDAF ကြောင့် Autofocus ပိုင်းမှာ ပိုမြန်၊ ပိုတိကျတဲ့ စွမ်းဆောင်မှုမျိုးရနိုင်မယ်လို့ Sony က ဆိုထားပါတယ်။
IMX 607 ကို ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာစေမယ့် နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ Effective MP ပါ။ Quad Bayer မှာ 12MP Photo ရဖို့ 48MP ထိ သုံးရပေမယ့် IMX 607 ရဲ့ 38MP ကတော့ Dual Bayer Arrangent ကြောင့် 19MP Resolution နဲ့ Photo တွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ထိ အလားအလာရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ High SNR (Signal to Noise Ratio) Function, အလင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ISO 50, 500 နဲ့ 5000 ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် Ambient Light Sensor ကြောင့်လည်း Low Light Photography မှာ ခုထက်ပိုပြီး တိုးတက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
အဲလို Quad Bayer ထက် ပိုအားသာမယ့်အချက်တွေရှိနေပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း Pixel (၂) ခုစာပဲ Binning လုပ်တာမို့ Pixel Size လျော့နည်းနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်များရှိလာမလားဆိုတာကတော့ သံသယဝင်စရာပါ။ Sony လည်း အဲဒီအချက်ကို ထည့်တွေးခဲ့ပုံရတယ်။ အဲဒါကြောင့် IMX 607 ရဲ့ Sensor Size ကို 1/1.8″ အထိတိုးမြှင့်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ လက်ရှိ Smartphone Sensor တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။
ဒီတော့ IMX 607 သုံးမယ့်ဖုန်းတွေ ဘယ်တော့လောက် မြင်ရနိုင်မလဲ? GSMArena ရဲ့အဆိုအရ Huawei ရဲ့ P30 Pro မှာ ဒီ Sensor နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ Sony ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ရဲ့ XZ4 မှာ ဒီ Sensor ကို သုံးလာနိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ်။ (နဂိုကတည်းက 19MP Camera တွေ အသုံးများခဲ့တာဆိုတော့) ဆိုတော့က Sony ရဲ့ IMX 600 Sensor တွေဟာ Huawei P20Pro နဲ့အတူ Smartphone Camera လောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သလို အခု IMX 607 ကလည်း Brand တွေကြားက Camera အားပြိုင်မှုမှာ ဘယ်လောက်ထိ အထောက်အကူပြုနိုင်မလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ အသေချာပါပဲ။ (Huawei နဲ့ Leica တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း Article တစ်ခု သပ်သပ်ရေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိနေလို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး)
ဒီ Page ကို စတငျခဲ့တုနျးက Megapixel တှမြေားခွငျးဟာ Smartphone Photography ကို တကယျရော Effective ဖွဈစရေဲ့လားဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရပျတံ့မနတေဲ့ နညျးပညာရစေီးကွောငျးက Smartphone တှမှော Megapixel မြားမြားကို Effective ဖွဈစမေယျ့နညျးလမျးကို ရှာတှစေ့ခေဲ့တယျ။ အဲဒါကတော့ Quad Bayer Arrangement လို့ချေါတဲ့ Pixel အသေး (၄) ခုကို Pixel အကွီး တဈခုအဖွဈပေါငျးပွီး ဖနျတီးတဲ့ Pixel Binning ဆိုတဲ့ နညျးပညာပါ။ (Pixel Binning အကွောငျးကိုတော့ အကယျြတဝငျ့ရှငျးပွပွီးထားပွီမို့ ထပျမရှငျးတော့ပါ)
သို့ပမေယျ့ Pixel Binning ရဲ့အားနညျးခကျြတဈခုက လိုခငျြတဲ့ Megapixel ပမာဏကိုရဖို့ Megapixel ကို (၄) ဆတိတိ သုံးပေးရတာပါ။ (ဆိုလိုတာက Pixel Binning မှာ 10MP Photo အတှကျ 40MP Camera ကို သုံးရတာမြိုးပါ) အဲဒီအတှကျ ပိုကွီးတဲ့ Sensor Size ကိုသုံးရတယျ။ ဒီတော့ 12MP Photo အတှကျဆိုရငျ လိုအပျတဲ့ MP က 48MP ထိ ရှိလာပါပွီ။ (2019 မှာထှကျရှိမယျ့ ဖုနျးတှမှော အသုံးမြားလာမယျ့ Camera ဆိုလညျး မမှားပါဘူး။) အဲဒီလိုအပျခကျြကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ Sony ကနေ အကောငျးဆုံးလို့ဆိုနိုငျမယျ့ Solution တဈခုကို ခပြွနိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒါကတော့ Sony ရဲ့ IMX 607 Sensor ပါ။
Sony ဟာ လကျရှိ Smartphone Camera ဈေးကှကျရဲ့ Camera Sensor Main Supplier အဖွဈ ရပျတညျနခေဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ IMX 363 ဟာ 2018 ရဲ့ Flagship အတျောမြားမြားမှာပါဝငျတဲ့ 12MP Camera တှအေတှကျ “စံ”တဈခုဖွဈခဲ့တယျ။ သို့ပမေယျ့ Samsung ကနေ Megapixel မြားမြားနဲ့ Pixel Binning ကို သုံးနိုငျမယျ့ ISOCELL Sensor တှကေို ခပြွလာတဲ့အခါမှာ Sony အတှကျ ပိုကောငျးမယျ့ နညျးပညာတဈခုကို ဖနျတီးပွဖို့ အခြိနျတနျပွီလို့ ယူဆပုံရတယျ။ ဒီတော့ Sony အတှကျရော Smartphone Camera နယျပယျအတှကျပါ Game Changer ဖွဈလာနိုငျတဲ့ IMX 607 Sensor မှာ ဘာတှမြေား ထူးခွားနလေို့လဲ?
အရငျဆုံး သူ့မှာပါမယျ့ Megapixel နဲ့ စ ရအောငျ။ IMX 607 မှာ 38MP ကို အထောကျအပံ့ပွုနိုငျမယျ။ Pixel Binning (4 in 1) အရဆိုရငျ သူ့ရဲ့ Effective MP က 9MP ပဲရှိနမှောပါ။ ဒါဆိုရငျ သူ့ Sensor က 48MP Camera သုံးနိုငျမယျ့ Sensor တှထေကျ ပိုမနိမျ့နဘေူးလားလို့ တှေးစရာရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ 38MP Sensor ကို ပိုကောငျးတဲ့ Sensor အဖွဈ သတျမှတျရခွငျးက သူ့မှာသုံးထားတဲ့ နညျးပညာကွောငျ့ပါ။
သူ့ရဲ့ Pixel Arrangement (အောကျကပုံ) ကိုကွညျ့ရငျ Red, Green, Blue အပွငျ White Pixel တှကေိုပါ တှမွေ့ငျရမှာပါ။ ဒီတော့ အရငျ Quad Bayer Filter တှနေဲ့ ယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ နဂို Pixel (၄) ခုနရောမှာ (၂) ခုက White Pixel တှေ ဖွဈသှားမှာပါ။ ဒီတော့ White Pixel တှပေါလာလို့ ဘာအကြိုးထူးမလဲ? အလှယျပွောရရငျ အဖွကေ ပိုကောငျးတဲ့ HDR Photo တှကေို ပိုမွနျတဲ့အခြိနျအတှငျး ရိုကျကူးနိုငျမှာပါ။ အဲဒီ White Pixel တှအေလုပျလုပျပုံကို နဲနဲရှငျးပါ့မယျ။
Huawei Flagship ဖုနျး အမြားစု (Mate 20 မပါ) မှာ Monochrome Sensor တှပေါဝငျခဲ့တာကို မှတျမိကွမှာပါ။ Monochrome Sensor တှရေဲ့အားသာခကျြက Color Filter မပါလို့ သူ့ရဲ့ Pixel တှဟော အဖွူ တှခေညျြးဖွဈနတောပါ။ အဲဒီအကြိုးဆကျကတော့ အလငျးရောငျကို ပိုမိုစုပျယူနိုငျပွီး ပိုတိကပြွတျသားတဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဖမျးယူနိုငျတာပါ။ အဲဒါကွောငျ့လညျး Huawei က Main Camera နဲ့ရိုကျကူးခြိနျမှာ Monochrome Camera ကိုပါ အကူအဖွဈသုံးခဲ့တာပါ။ အခု IMX 607 မှာတော့ ပိုကောငျးတဲ့ ဓာတျပုံရဖို့ Monochrome Sensor သပျသပျမလိုတော့ပါဘူး။
သူ့ရဲ့အလုပျလုပျပုံက Quad Bayer နဲ့ ဆငျတူပါတယျ။ ကနျ့လနျ့ဖွတျ Pixel (၂) ခုက Short Exposure အတှကျ အလုပျလုပျခြိနျမှာ ကနျြတဲ့ Pixel (၂) ခုက Long Exposure အတှကျ အလုပျလုပျတယျ။ ဒါပမေယျ့ IMX 607 မှာပါတဲ့ White Pixel တှကွေောငျ့ အရငျ Color တှထေကျ အလငျးပိုစုပျနိုငျပွီး ပိုကောငျးတဲ့ HDR photo တှအေပွငျ Low Light Photography မှာပါ အရငျထကျပိုအထောကျအကူ ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ အရငျ Pixel တဈဝကျစီအလုပျလုပျတဲ့ Dual PDAF နရောမှာ Pixel (၂)ခုစီ ခှဲအလုပျလုပျမယျ့ Quad PDAF ကွောငျ့ Autofocus ပိုငျးမှာ ပိုမွနျ၊ ပိုတိကတြဲ့ စှမျးဆောငျမှုမြိုးရနိုငျမယျလို့ Sony က ဆိုထားပါတယျ။
IMX 607 ကို ပွိုငျဘကျတှထေကျ ခေါငျးတဈလုံးသာစမေယျ့ နောကျတဈခကျြက သူ့ရဲ့ Effective MP ပါ။ Quad Bayer မှာ 12MP Photo ရဖို့ 48MP ထိ သုံးရပမေယျ့ IMX 607 ရဲ့ 38MP ကတော့ Dual Bayer Arrangent ကွောငျ့ 19MP Resolution နဲ့ Photo တှထေုတျပေးနိုငျဖို့ထိ အလားအလာရှိနပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့ High SNR (Signal to Noise Ratio) Function, အလငျးအခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ISO 50, 500 နဲ့ 5000 ကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျမယျ့ Ambient Light Sensor ကွောငျ့လညျး Low Light Photography မှာ ခုထကျပိုပွီး တိုးတကျလာဖို့ရှိနပေါတယျ။
အဲလို Quad Bayer ထကျ ပိုအားသာမယျ့အခကျြတှရှေိနပေမေယျ့ တဈဖကျကလညျး Pixel (၂) ခုစာပဲ Binning လုပျတာမို့ Pixel Size လြော့နညျးနိုငျတဲ့ အားနညျးခကျြမြားရှိလာမလားဆိုတာကတော့ သံသယဝငျစရာပါ။ Sony လညျး အဲဒီအခကျြကို ထညျ့တှေးခဲ့ပုံရတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ IMX 607 ရဲ့ Sensor Size ကို 1/1.8″ အထိတိုးမွှငျ့ထားတာ တှရေ့တယျ။ ဒါဟာ လကျရှိ Smartphone Sensor တှထေဲမှာ အကွီးဆုံးလို့တောငျ ပွောလို့ရတယျ။
ဒီတော့ IMX 607 သုံးမယျ့ဖုနျးတှေ ဘယျတော့လောကျ မွငျရနိုငျမလဲ? GSMArena ရဲ့အဆိုအရ Huawei ရဲ့ P30 Pro မှာ ဒီ Sensor နဲ့အတူ ပှဲထှကျလာဖို့ ရှိနပေါတယျ။ Sony ကိုယျတိုငျလညျး သူ့ရဲ့ XZ4 မှာ ဒီ Sensor ကို သုံးလာနိုငျခွေ ရှိနပေါတယျ။ (နဂိုကတညျးက 19MP Camera တှေ အသုံးမြားခဲ့တာဆိုတော့) ဆိုတော့က Sony ရဲ့ IMX 600 Sensor တှဟော Huawei P20Pro နဲ့အတူ Smartphone Camera လောကကို ပွောငျးလဲစခေဲ့သလို အခု IMX 607 ကလညျး Brand တှကွေားက Camera အားပွိုငျမှုမှာ ဘယျလောကျထိ အထောကျအကူပွုနိုငျမလဲဆိုတာတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာ အသခြောပါပဲ။ (Huawei နဲ့ Leica တို့ရဲ့အကွောငျးကိုလညျး Article တဈခု သပျသပျရေးသှားဖို့အစီအစဉျရှိနလေို့ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦး)